तपाईं IBM वाच लगाउन सक्नुहुनेछ जुन ट्याब्लेटमा परिवर्तन भयो क्रिएटिव अनलाइन
हुन सक्छ आईबीएम एक घडी संग उपकरणहरुमा फर्कियो कि धेरै आश्चर्य एक टेबल बन्न र यसैले भविष्यको तह उपकरण बन्न। र जब सामसु and र हुवावे जस्ता अन्य ब्रान्डले यी प्रकारका उत्पादनहरूका लागि धेरै जोड दिन्छ।
मेरो मतलब, हामी त्यस घडीको बारेमा कुरा गर्छौं तपाईंले आफ्नो कलाईमा लगाउनु भएको पर्दा स्क्रीन हुन सक्छ ट्याब्लेट ढाँचाको साथ मानौं कि हामी एक पूर्ण भविष्यको चलचित्रको सामना गरिरहेका छौं। यो ठ्याक्कै पेटन्ट हो जुन IBM ले सबैको आश्चर्यका लागि दर्ता गरेको छ।
यदि हामीसँग पहिले नै सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड छ र त्यो ठीकसँग यो पहिले नै समस्या पछि यसको पुन: डिजाइन छ प्रेस संस्करणको साथ भयो, आईबीएमको हातमा यस्तो छ कि एउटा स्मार्टवाचको साथ अर्को चरण के हुन्छ जुन पूरै टेबल हुन्छ।
IBM को रूपमा उपकरण लाई दर्शाउँछdउपकरणको लागि पुनःआकार योग्य स्क्रीनe इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन। एक स्क्रीन के हो जुन हाम्रो आवश्यकता अनुसार विस्तार वा कम गर्न सकिन्छ। प्याटेन्टमा पनि यो देख्न सकिन्छ कि उपकरण एकै समयमा एक, चार वा आठ जडित स्क्रीनहरूको साथ काम गर्न सक्षम हुनेछ।
मध्यम आकारको ट्याब्लेटमा विस्तार हुने सानो स्मार्टवाच कसले लिन सक्दैन? खैर, धेरै। प्रत्येक स्क्रिन measures x १० सेन्टीमिटर मापन गर्दछ र यसको अधिकतम आकारमा यो x० x c० सेन्टिमिटरसम्म पुग्न सक्दछ। नराम्रो छैन, तपाईलाई लाग्दैन?
अहिले अधिक पागल विचार जस्तो देखिन्छ त्यो त्यस्तो वास्तविकता हो जुन हामीले "स्पर्श गर्न" सक्छौं। यो अझ राम्रो प्याटेन्ट हुनुको कारण हामी त्यसलाई त्यो स्थानमा छोड्छौं जुन यो बजारमा पुग्न सक्दछ वा केवल कल्पना गरिएको तर वास्तविक प्याटेन्टमा रहँदैन। हामी के हुन्छ हेर्नेछौं, तर यदि यो IBM द्वारा प्याटेन्ट गरिएको छ भने हामी यो महान कम्पनीबाट सबै कुरा आशा गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » IBM ट्याब्लेटमा परिवर्तन हुन्छ कि एक घडी प्याटेन्ट गर्दछ
Luminar क्लाउड तपाईंको फोटो ब्याच कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ बृद्धि गर्दछ